पटक–पटक पुरुष र महिलाबाट बलात्कृत भएको मेरो पीडा बुझ्ने कस्ले ? « Sansar News
पटक–पटक पुरुष र महिलाबाट बलात्कृत भएको मेरो पीडा बुझ्ने कस्ले ?
२० चैत्र २०७८, आईतवार १३:३४
म एक गिगोलो वा पुरुष यौनकर्मी हुँ । ‘बीए पास’ फिल्म हेर्नुभएको छ भने सायद मेरो पीडा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । म पनि जिस्फोसीको अँध्यारो गल्लीको हिस्सा बन्न बाध्य भएँ । जहिले पनि छाड्न मन लाग्यो, चिप्लिएर फेरि त्यहाँ पुगे । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, पुरुष यौनकर्मीहरूको संसार महिला यौनकर्मीहरूको संसारभन्दा फरक छ । महिला यौनकर्मीमाथि हुने अन्यायको कुरा मानिसहरु गर्छन तर कहिले सोचेका छन कि पुरुष यौनकर्मीहरु पुरुषहरुसंगै महिलाहरुबाट पनि बलात्कृत हुन्छन् । बोल्न पनि सक्दैनौं ।
कसले पत्याउला हाम्रो कुरा…
मेरो नाम अवधेश शर्मा हो । म राजस्थानको एक मध्यम वर्गीय परिवारमा पर्छु । म चार दाजुभाइमध्ये कान्छो हुँ, त्यसैले मैले मेरो कुरा बुझ्थें । मलाई सन्नी देओल मन पथ्र्यो । सनी देओल बन्न मुम्बई जानुपर्छ भन्ने मनमा थियो ।
स्नातक गरेपछि साथीको सहयोगमा मुम्बई आए । उनीसँग दस वर्षसम्म मित्रता थियो । रातको समय थियो । म बान्द्रा स्टेसनमा ओर्लें र मलाडमा उनको घर जानको लागि अटो लिए । घर पुग्दा उनले मेरो राम्रो हेरचाह गरे । त्यसपछि सोध्न थाल्यो भाइ कहाँ बस्ने ? यो सुनेर मेरो होश उडायो ।
मैले उनलाई भनेँ, म तिम्रो भरोसामा मात्र आएको हुँ । यसमा उनले भने कि होइन, यो मुम्बई हो, मेरो राजा, यहाँ कसैले कसैलाई राख्दैन । रात थियो, मुम्बई मेरो लागि नयाँ थियो । उसको घरको छेउछाउको पार्कमा बसेर त्यो रात बिताएँ ।
भोलिपल्ट बिहान एउटा केटाले सोध्यो तिमी किन यहाँ यस्तोमा बसेका छौं ? मैले उसलाई सबै कथा सुनाएँ । उसले भन्न थाल्यो कि तिमी मसँग केही दिन बस्न सक्छौ तर पैसा तिर्नुपर्छ । मसँग कुनै विकल्प थिएन त्यसैले म उनको घर गएँ ।
केही दिन घुमफिर गरेपछि ‘माता की चौकी’ टिभी सिरियलमा काम मिल्यो । त्यसमा मेरो काम अनुहारमा मास्क लगाएर उभिनु थियो । घरपरिवारको दबाब बढ्दै गयो कि टिभीमा पनि नआउने । मलाई लाग्थ्यो म यो सबै गर्न मुम्बई आएको होइन ।
त्यो घरको झ्यालबाट बारम्बार एउटा केटालाई देख्थें । गाडीमा बसेर मेकअप गर्दै आफूलाई सजाउन थाल्थ्यो । एकदिन बिहान उसले मलाई दूध पसलमा भेट्यो । मैले उहाँलाई नमस्कार भनेँ । बिस्तारै उसँग कुरा गर्न थालेँ । जब मैले उसलाई हरेक साँझ लुगा लगाउने रहस्य सोधे, उसले पार्टीमा जानका लागि भन्ने जवाफ दियो । उसले मलाई त्यो साँझ पार्टीमा आउन निम्तो समेत दियो ।
म पार्टीमा गए । तर त्यो संसार हामी मानिसहरूको संसारभन्दा फरक थियो । त्यहाँ केटा र केटीहरू, ट्रान्सजेन्डर, गे, लेस्बियन थिए । त्यो अनौठो वातावरणमा मलाई निसास्सिएको महसुस भयो । जससँग म पार्टीमा गएँ, उसले मलाई रमाइलो गर्न भन्यो । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, म त्यहाँ धेरै डराएको थिएँ । मध्यरातपछि हामी दुबै घर आउदै थियौ । मैले उनलाई काम खोजिदिन भने । उनले भन तिम्रो काम पाउनका लागि त्यो पहिलो खुड्किलो थियो तर तिमी त्यहाँ डराएर बस्यौं ।
केही दिनपछि उसले मलाई एकजना मानिसकहाँ पठायो । म उनको घर गएँ । घरमा उनी एक्लै थिए । काम सकिएपछि उसले मेरो काँधमा हात हाल्न थाल्यो । मलाई उनको स्पर्श नराम्रो लाग्न थाल्यो। सायद उसले मलाई कुनै खानेकुरामा हल्का मादक पदार्थ दिएको थियो । मलाई के भइरहेको थियो मलाई थाहा थियो, तर मैले यसलाई रोक्न सकिनँ । विरोध गर्दा उसले मलाई भन्यो, ‘हे यार, शरीर त हो, खिइने वस्तु त होइन नि !’
त्यसपछि उसले मसँग त्यो सबै गर्यो जसलाई बलात्कार भनिन्छ, तर म पुरुष हुँ यस्तो कुरा म कहाँ अनि कसलाई सुनाउ ?
त्यो दिन घर आएपछि चार दिनसम्म बन्द कोठामा रोइरहेँ । पछि आत्मबलले भरियो । कसैले, रोएर हुँदैन भनेको शब्दहरु कानमा घण्टी जस्तै गुन्जिन थाले कि, यो काम गर्नुपर्छ, काम पाउनको लागि यो पहिलो पाइला हो ।
जे होस्, कामको अभावमा भोकभोकै अवस्थासम्म आइपुगेको थिएँ । घर फर्किन पनि सकेन । एक दिन मलाई त्यही व्यक्तिको फोन आयो जसमा मलाई आफ्नो घर आउन आग्रह गरे । मलाई काम चाहिएको थियो त्यसैले उसको घर गएँ । यसपटक हामीबीच जे भयो सहमतिमा भयो । त्यो दिनको सबै कुरा पछि, मैले उसलाई केहि सम्पर्कको लागि सोधे ं। उसले मलाई अर्को मान्छेको नम्बर दियो ।
मैले उसलाई फोन गरेर उसको घर गएँ । त्यहाँ गएपछि थाहा भयो उसलाई मेरो बारेमा पहिले नै थाहा थियो । उसले भन्न थाल्यो –कि तिमीले धेरै राम्रो काम गर्छौ भन्ने सुनेको छु ।’ चिया–पानी खाएपछि उसले मलाई सुत्ने कोठामा जान इशारा गर्यो । त्यहाँ पहिले नै अर्को केटा थियो । उसले मलाई सामूहिक सेक्सको लागि सोध्यो, मैले अस्वीकार गरें । तीन पुरुषबीच सामूहिक यौनसम्बन्ध राख्नु मेरो लागि सम्भव थिएन ।
त्यो केटा त्यो मान्छेको आदेशमा बाहिर निस्कीयो । त्यसपछि त्यो मान्छे र मेरो बीचमा सम्बन्ध भयो । मलाई यो कामको लागि त्यो मान्छे मन पर्यो । उ भन्थ्यो, तिमी चौबीसै घण्टा यहीँ बस, मसँग यी सबै गर । म सोच्थेँ कि यी कस्ता बिरामी दिमागका मान्छे हुन्, मेरो शरीरजस्तै हुन्, हामी दुवैको शरीरमा एउटै अंग छ, त्यसैले मसँग कसरी रमाइलो गर्ने ।
खैर, मैले काम पाउन खोजेको थिएँ । मान्छेको निमन्त्रणामा म धेरैपटक उनको घर गएँ । हामीबीच सहमतिको सम्बन्ध थियो । म पनि यी जनताको पार्टीमा जान थालेँ । त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि, यी व्यक्तिहरूको व्हाट्सएप समूहहरू बनाइएको छ। जब नयाँ केटा आउँछ, यी मानिसहरू उसलाई नयाँ शिकारको रूपमा लिन्छन् । सबैले उसँग सम्बन्ध राख्छन् ।
मैले एकपटक पार्टीमा एउटी केटीलाई भेटे ं। बिस्तारै उनीसँग मेरो मित्रता बढ्दै गयो । मैले आफ्नो पीडा उसलाई सुनाएँ कि म यो सबै गर्न थाकेको छु । उनले मलाई भनेकी आफुले का मगर्ने उद्योगमा धेरै राम्रा मान्छेहरुको लिंक छ । अब यो पर्याप्त छ, कम्तिमा उबाट केही राम्रो लिङहरू प्राप्त गरे ।
एक दिन मैले उसले दिएको लिंकका मानिसलाई फोन गरेर घर आउन चाहेको बताए । । म त्यहाँ पुग्दा उ तयार भएर बसिरहेको थियो । त्यसपछि मैले उसँग स्पष्ट कुरा गर्दै भने–म जसरी भए पनि काम चाहन्छु । तिमी जे भन्छौ म गर्छु, तिमीले बोलाएको ठाउँमा आउनेछु । ती व्यक्तिको साउथ उद्योगमा राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यसको सट्टा उसले मलाई नग्न बनेर बसेको मान्छेसँग सम्बन्ध राख्न पठायो ।
यसलाई किन्नर भनिन्छ। किन्नर भनेको माथिबाट महिला र तलबाट पुरुषको शरीर हो । मैले अहिलेसम्म किन्नरको बारेमा सुनेको थिएँ, तर पहिलो पटक देखेँ । त्यो मान्छेले मलाई धेरै पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउन पठायो र म पनि आँखा बन्द गरेर यो दलदलमा बसें ।
अन्ततः उसलाइ म माथि दया लाग्यो । उनले मलाई साउथमा काम गछौं भनेर सोध्यो । मैले हुन्छ भनेँ । यो दलदलबाट बाहिर निस्कनु राम्रो हो भन्ने लाग्यो । म साउथमा गएँ । त्यहाँ एकजना ड्रेस डिजाइनरले मेरो नाप लिइरहेका थिए । नाप्दै उनले मेरो कानमा नरम स्वरमा भने– तिम्रो प्रदर्शन जताततै राम्रो छ भनेर सुनेको छु ।’
यो सुनेर म छक्क परें । मलाई लाग्यो कि गाँजा इनारमा नै भेटियो। यो ड्रेस डिजाइनर एक लाइन निर्माता पनि थियो । उसले मलाई ठेगाना दियो र राति त्यहाँ आउन भन्यो । म त्यहाँ गएँ र उसँग पनि मेरो सम्बन्ध बन्यो ।
म अब थाकेको थिएँ। जहाँ काम माग्न जान्छु, सबैले पहिले यही कामको लागि बोल्छन् भन्ने लाग्यो । म सोच्न थालेँ कि यस्तो काम किन मिल्छ ? मैले यो काम खुसीले गरेको होइन । पुरुषसँग सम्बन्ध राख्दा मलाई भित्रैबाट असाध्यै घृणा र पीडा लाग्थ्यो ।
मैले महसुस गरें कि यति धेरै जबरजस्ती सेक्स गर्दा मेरो अनुहारमा प्रभाव देखिन थाल्यो । म थाके, भाँचिन्थे, हात जोड्थेँ तर कसैले म माथि दया गरेन ।
त्यो साउथ फिल्मको सेटमा एक वृद्ध पनि थिए । एक दिन उनले मलाई आफ्नो घरमा बोलाए । तिमीजस्ता धेरै केटाहरू यहाँ आउँछन् । उनले मलाई खाना खुवाए र यहाँबाट जाउ भन्न थाले । यदि सम्भव छ भने, यी मानिसहरूको संसारबाट टाढा जाउ । उसको कुरा सुनेर म सानो बच्चा जस्तै रुन थालेँ ।
मलाई यो सब गर्न मन लाग्दैन तर कुनै बाटो पाइनँ भने । उनले भने, ‘कति दिन काम पाइँदैन, महिना, दुई महिना, छ महिना तर तिमी यी मान्छेको संसारबाट निस्कन्छौ । फोन नम्बर परिवर्तन गर । म साउथबाट फेरि मुम्बई फर्किएँ ।
मुम्बई आएपछि एक एक प्रोडक्सन हाउसबाट अर्को प्रोडक्सन हाउसमा कामको लागि धक्का खाइरहेँ । पैसाको अभाव थियो । कहिलेकाहीँ मलाई यी मध्ये कसैलाई फोन गर्न मन लाग्थ्यो । पहिलेका नम्बर डायल गर्न छाडिदिएँ किनकी फेरि यस्तो दलदलमा फस्न नपरोस् । एक दिन, एक प्रोडक्शन हाउस बाहिर, मैले मलाई साउथ पठाएको मान्छे भेटें । मलाई देखेर उसले भन्यो ‘तिमी कता थियौं ?, मैले हजुरआमा बितेका कारण दिल्ली गएको बताए । उनले मलाई भेट्न आग्रह गरे ।
अब पैसाको संकट घाँटीसम्म आयो । के गरुँ भन्ने मनमा हडबडी हुन थाल्यो । यी व्यक्तिहरूको समूहकी एक महिलाको मसाज पार्लर थियो । मैले ती महिलालाई बोलाएर जागिर मागेँ । उनले दर्ताका लागि रु २५०० जम्मा गरेर १५ दिनको मसाज तालिम लिनुपर्ने बताइन् । उनले मलाई ग्राहक आएपछि बाहिर लाइनमा उभिन भनिन्, जसले तिमीलाई छनोट गर्छन् उसँगै केबिनमा जानु ।
धनाढ्य महिलाहरू सुरुका चार–पाँच दिन त्यहाँ आए, तर मलाई मसाज गर्न कसैले रोजेनन्, अरू केटाहरू छाने । म यहाँ पनि निराश भएँ । त्यसपछि ती महिलाले मलाई हतार नगर्नु, कोही आउँछ भनिन् । करिब एक हप्ता पछि एउटी महिलाले मलाई मसाजको लागि रोजिन् ।
उनको उमेर ३८ देखि ४० वर्षको थियो । म उनीसँगै केबिनमा गएँ । मसाज गर्दै गर्दा उनी म सँग रमाउन थालिन् । म पहिलो पटक महिलासँग रमाइलो मानिरहेको थिए । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, मलाई पनि र आनन्द लागिरहेको थियो । हामी दुबैले घण्टौंसम्म एकअर्कालाई चुम्बन गरिरह्यौं । उनले मलाई घर आउन आग्रह गरिन् । उनको घर जान मलाई १० हजार रुपैयाँ तोकियो । भोलिपल्ट म उनको घर गएँ । ती महिला धनी थिइन् । उनका श्रीमान विदेशमा बस्दै आएका थिए । उनी बाहेक उनको आलिशान घरमा महँगो कुकुर थियो ।
महिलाले नाइटी लगाएकी थिइन् । म धेरै उत्साहित थिएँ । उनले मलाई खाना खान भनिन् । मैले पिज्जा अर्डर गरें । बेलुकीको खाना खाइसकेपछि रातभर उनीसँगै उनको सुत्ने कोठामा बसे । हाम्रो पहिलो पटक सम्बन्ध थियो । एकपटक सम्बन्ध पछि, उनले मलाई मरिन ड्राइभ र सीलिंकमा एक रातको लागि आफ्नो कारमा घुमाउन लगिन् । त्यो रात मैले पहिलोपटक उनीसँग मरिन ड्राइभ र सिलिङ्क देखेँ । म जंगली जस्तै व्यवहार गरिरहेको थिएँ । रातको उज्यालो देखेर म पागल जस्तै भइसकेको थिए ।
बाटोमा उनले आफ्नो कथा सुनाइन् । श्रीमान् भारत विरलै आउने गरेको उनले बताइन् । उनलाई शंका छ कि उनका श्रीमानले त्यहाँ पुनर्विवाह गरेका छन् । तर उनको लागि कुनै कसर छोडेनन् । ती महिलासँग यति धेरै पैसा थियो कि म वर्णन गर्न सक्दिनँ । मलाई आफ्ना कुरा सुनाउँदा उनी लगातार रोइरहेकी थिइन् । खैर हामी घर पुग्यौं । उनले आफ्नो लागि एउटा प्याग बनाइन् र हामीले फेरि एक अर्कासँग बेडरूममा राम्रो समय बितायौं । बिहान निस्कँदा खुसी भएर उनले मलाई १० हजारको सट्टा १५ हजार दिए ।
म र ती महिलाबीच यो क्रम सात महिनासम्म चलिरह्यो । म उनीकहाँ जान्थें, हामीसँग राम्रो समय हुन्थ्यो र उनले मलाई पैसा दिन्थिन् ।
एकदिन उनको घरमा पार्टी थियो । मलाई पनि बोलाएका थिए । म उनको घरमा गएँ, त्यहाँ करिब ४० वर्षदेखि मध्यम उमेरका महिलाहरू थिए । एक हिसाबले, यो धनी महिलाहरूको किट्टी पार्टी प्रकार थियो । त्यो जमघटमा मलाई अलि असहज महसुस भयो । पार्टीपछि, महिलाले मलाई उनको घरमा बस्न भनिन्, तर मैले मानेन । जाँदा उनले मलाई भनिन्– यिनीहरू मध्ये कुनै केटी मन पर्यो भने भन ।
त्यहाँ गएपछि म आफ्नो काममा व्यस्त भएँ । मैले ती महिलासँग कुरा गरिन । एकदिन मैले उनलाई फोन गरेर भेट्न आग्रह गरें । मैले उनलाई भने कि, त्यो दिन किट्टी पार्टीमा आएकी एक महिलालाई भेट्न चाहन्छु । उनले ठिकै छ भनिन् ।
म तिमी जहाँ चाहान्छौं त्यहाँ पठाउँछु, तर सर्त यो छ कि तिमी संसारको जुन कुनामा बसे पनि मैले फोन गर्दा तिमी आउनुपर्छ । म तिमीलाई पैसाको कमी हुन दिन्न । मलाई पैसा चाहिएको थियो, मैले मेरो प्रदर्शन सधैं राम्रो रहने वाचा गरें । उनले मलाई ती महिलाको फोन नम्बर दिइन् ।
मैले ती महिलालाई बोलाएँ । उनले मलाई एक ठाउँमा बोलाइन् । निर्धारित समय अनुसार म त्यहाँ पुगें । त्यहाँ तीन जना महिला थिए । उनीहरु सामूहिक सेक्स चाहान्थे । तीनैजनाले मेरो शरीरमा जे मन लाग्यो त्यही गरे । म त्यो रात धेरै पीडामा परे । एकपल्ट त मैले हात जोडेँ । म थकित भएर सुतेँ, उनीहरुले मेरो शरिरलाई जसरी चाह्यो त्यसरी नै प्रयोग गरे ।
बिहान उनीहरुले मलाई २५ हजार रुपैयाँ दिए ।
यस्ता धनी महिलाहरूबाट जति पैसा पाएँ, जम्मा गरिरहेँ । त्यसपछि मैले जम्मा गरेको पैसाले नै गाउँमा एउटा कोठाको फ्ल्याट किनें । घरमा पनि राम्रै पैसा पठाउँथे । अहिले धेरै ठाउँमा काम पाउन थालेको छु । धनी महिलाहरू मेरो ग्राहक थिए। एक रातको दश हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउँथें । कसैका श्रीमान् बाहिर बस्थे, कसैको श्रीमान् कतै सेट थिए, कसैको श्रीमान विदेशमा त कसैका श्रीमान थिएनन् ।
यी मध्ये केही महिलाहरु केवल सेक्स मात्र चाहन्थे । कोही मसँग गुणस्तरीय समय बिताउन चाहन्थे र कोही आफ्नो कथा सुनाउँदै रुन थाले । अवश्य पनि समाजको रीतिरिवाज विपरित विवाह भए पनि यी महिलाले मसँग सम्बन्ध राख्थे, तर मैले उनीहरुको एक्लोपन बुझेँ । एकपल्ट मसँगै बसेकी महिला फेरि मसँग रात बिताउन चाहन्थिन् ।
मेरो जीवन अहिले राम्रै चलिरहेको थियो । मैले आफ्नो शरिर दिएर यी महिलाहरुबाट धेरै पैसा उठाए । मलाई लाग्छ जीवन जिउनका लागि यो पर्याप्त छ । पुरुष र धनी महिला दुवैले मेरो शरीरलाई धेरै लुटे । शरीरको सट्टामा, मैले पुरुषहरूबाट नेटवर्क र काम पाएँ । महिलाहरूले ममाथि पैसाको वर्षा गरे । म अब जीवन सेट गर्न चाहान्छु । अभिनय गर्दागर्दै एक युवतीसँग नजिक भएँ । मैले उनलाई आफ्नो बारेमा सबै बताए । हामी दुवै तीन वर्षदेखि सँगै बस्दै आएका छौं र अब विवाह गर्न लागेका छौं । भास्कर डटकमबाट